Phakathi kwentsha ojabulela puzzle noma nje eduze ukuqapha amarekhodi ezihlukahlukene zomhlaba, kwaziwa kahle ukuthi igama elilodwa - feliks Zemdegs. It kuvela ukuthi umfana elula ongenayo abazali noma imodeli lezinkanyezi ngendlela elibukeka ngayo, ungase futhi uthole isikhashana bebona inkazimulo, futhi ecaleni lakhe - imizuzwana embalwa. Ngosizo kwalokho baduma, funda ku.
Biography ithalente abasha
Feliks Zemdegs - ngalendoda abavelele puzzle ezahlukahlukene, kufaka phakathi Cube Rubik sika. Okwamanje azazisa usezakhele igama njengomqambi iqhawe emhlabeni amaningi isilinganiso zomhlangano, kanye usetha irekhodi emangalisa - ababebuthene cube yokulinganisa 3 x 3 4,73 imizuzwana.
Felix owazalelwa e-Australia, e Melbourne edolobheni. Disemba 20 wayengumuntu 21. Ngu amazinga ubukhulu izimpumelelo zakhe kuyinto esemncane kakhulu. Ukuze impumelelo yabo ku ukuhlangana cube Championships wafika ngokusebenzisa ukuqeqeshwa kungaqedwa. Kwelinye izingxoxo uFeliksi wathi ukuthi kule minyaka eyi-10 yokuphila kwakhe lesinyenti kwesikhathi ukuqeqesha. Amahora angaphezu 3000, lapho eligoqiwe cube the Rubik futhi kabili njengoba amaningi asetshenzwa ukwenza spidkubingom professional (lokhu kuhlanganisa iqhaza Championships, imihlangano yomphakathi, njll).
Lo muntu abazikhandlayo ukwenza njalo nsuku zonke Ukuphambukisa yakhe wokuzilibazisa 1 awa ngelilanga, okwenza mayelana 50 puzzle inhlangano. Kuphela sibonga ukuphikelela yakhe nokuzikhandla kwakhe ekufezeni feliks Zemdegs akhula ngokushesha, ngezikhathi ezithile ezibonisa zonke ijubane kumnandi ngaphezulu Championships. Futhi uma othile unikezwa icala kalula futhi ngokushesha, ungadikibali futhi bakhononde ngamamaki amashwa. On isibonelo Zemdegsa ungasho ngesibindi ukuthi kuleli zwe konke kungenzeka, into eyinhloko ayikona ukuhlanganisa ukuphelelwa ukholo ngamandla abo!
Feliks Zemdegs: amarekhodi
"I ukuphakamisa ukudala isigaba esisha amarekhodi zomhlaba, elinye libe ngelika-uFeliksi ngezinto zakhe ngiyaphupha eyodwa abantu evamile Uma lokhu ... Ngingumfana yamuka." - ngakho wabhala eyandulela wakhe, u-Erik Akkersdijk, ngemva kokunqotshwa kwakhe ngesikhathi seNdebe yoMhlaba ngo-2011 ngonyaka.
Amazing kakhulu impumelelo Zemdegsa esiteji emhlabeni kwaba ngo-December 2016 ngesikhathi HPOPS Vula 2016 emzini wakubo Melbourne. Lapho ngineminyaka engu-20, wagcina bahlangana cube esheshayo. Feliks Zemdegs waba irekhodi lomhlaba spidkubingu. Wabahlanganisela puzzle 3 × 3 × 3 4,73 imizuzwana futhi wathola isihloko ngokuphelele iqhawe emhlabeni.
iqhawe lethu emangalisayo unqobile imincintiswano eminingi futhi kuyaqhubeka kuze kube manje ukukhombisa ijubane eliphezulu kakhulu kanye nezobunhloli. Nalu uhlu lwezenzakalo ezibaluleke kakhulu kuye:
3 x 3 cube uqoqe for 6,54 imizuzwana ku Cube usuku Championships e Melbourne ngo-2013. Kukholakala ngu kusho inani 5 yesifunda.
A umzamo owodwa bahlanganise iphazili 4 × 4 kwaba yimpumelelo, umphumela lapho kamuva waba umlando womhlaba - 25,34 imizuzwana. Umi Shepparton ngo-2013.
Ngezinye-Australian National Championships ngo-2013, naye wacosha cube 5 x 5 x 5 ngemizuzwana 50,5 nje.
Ngesikhathi ubuqhawe efanayo nenani isilinganiso inhlangano cube kwaba ukubaluleka irekhodi - 56,87 imizuzwana.
Enye akuyona umzamo eziphawuleka kakhulu ukuxazulula impicabadala e Melbourne 3 x 3 x 3 kwenziwa ngoba 9,05 imizuzwana.
Usayizi omkhulu cube 7 x 7 x 7 akuyona prodigy bamangale: e isilinganiso yena abhekana naye imizuzu 2:52:09.
Umbhalo wakhe ogciniwe esibaluleke kakhulu aphuthelwe ngenxa ukwengamela encane - ezisheshayo omunye puzzle ubuso kuskrolelwa kude kakhulu nelanga, isinyathelo sokugcina inqunywa ukudalelwa. Inani engcono emhlanganweni cube 5.33 yathinteka nabo ngo-June 2014, i-29, kodwa ngaleso sikhathi ukunqoba kwakungelona feliks Zemdegs. . 4,79 imizuzwana - omunye imiphumela yakhe ephambili kunawo wonke, kodwa kuye kwaboniswa ngaphandle WCA imincintiswano olusemthethweni.
Naphezu kwakho konke lokhu, ngesikhathi esilandelayo izwe ubuqhawe e-United States of America, emzini Las Vegas, Feliksu uDali isihloko "ngalendoda omkhulu emhlabeni Rubik sika Cube."
Bamba iqhaza emncintiswaneni, uyaqhubeka kube yilolu suku nakwa has amarekhodi ayo. Eqinisweni awukho umkhawulo ekupheleleni!
Sexy Cube Rubik sika
Ngibize cube emangalisayo ubophekile Uprofesa Hungarian izakhiwo kanye nomklamo, Erno Rubik. Yaqalwa ngonyaka ka 1974 futhi ngenxa yokuthi lokho okujabulisa isikhathi ithoyizi nzima zasakazekela kulo lonke izwe. Mhlawumbe wonke umuntu enganginaso kusukela ebuntwaneni iphazili enjalo, ngoba lalinjalo ekuqaleni kwekhulu xxi, izwe bamukela igagasi elisha ukuthuthukiswa lo msebenzi. Kwabaningi, wokuzilibazisa elula kuye kwanda mdlalo ngisho lethiwa - spidkubing (ie, ngesivinini inhlangano yabantwana cube).
Cube has izinhlobo eziningana: kusukela puzzle zakudala ubhekene 3 (3 x 3 x 3), kukhona embodiments 2 x 2 x 2 no-4 x 4 x 4. Kube abathanda wazama ukwakha giant cube osayizi - kusuka 12 x 12 kuya 17 x 12 x 17 x 17 baningi-copyright algorithm elalinikezelwe inhlangano yabantwana cube the Rubik sika (tvoix rukax indlela, isibonelo). Kwakucatshangwa ukuthi kungenzeka ukuba abuthe-step 52, kusukela kunoma isiphi isimo, futhi cishe - udinga ukusebenzisa eside ukuze uthole it right. Kodwa noma kunjalo kuba Amazing unokuhlakanipha okumangalisayo.
Spidkubing njengendlela yokuphila
Abantu abayimilutha babuthane cube the Rubik sika, abizwa ngokuthi spidkuberami. Emhlabeni wonke, kuba ukunyakaza asebenzayo intsha kanye nentsha ezithuthukayo. ERussia nabo usebenza Community cube abalandeli. La madoda zinengxenye imikhosi eminingi ngisho umbukiso ithalente. Lapha ezemidlalo uthando liphenduka futhi spidkubing kumkhathaza ngisho ingathiwa umdlalo. Nakuba isebenza kumuntu hhayi isicubu, kanye nobuchopho.
Ukwahlulela ngokubukeka impumelelo Zemdegsa kulo msebenzi, professional ngalendoda ngayinye baye. Zonke amarekhodi ezenzeka ngale samakhono abantu, kodwa guys abasha futhi abanamakhono ukuqhubeka ukufakazela futhi abone ngokuphindaphindiwe ukuthi akukho akunakwenzeka. Spidkubing ngabo - hhayi nje yokuzilibazisa, kodwa ukuphila.
Izisekelo for GM. ukuzivikela Sicilia
"Columbus Iqanda" - umlutha puzzle game for izingane kanye nabantu abadala
Engeziwe ephezulu ugongolo headlamps. Lights Asizayo: ngobuhle nangobubi bawo
Ungaya nyangazonke ngesikhathi sokukhulelwa futhi yini kuyingozi?
"Vitaprost" (amaphilisi): ukubuyekezwa. Incazelo izidakamizwa, odokotela iseluleko
"Klarisens": yokusetshenziswa. Ukubuyekeza, analogue, intengo
I-model ye-Alienware. I-Laptops Alienware - yiziphi izici zabo?
Umzabalazo intraspecific: Definition, Izimbangela Nezingozi Izici
Indlela yokwenza inhlama yamanzi